Chatbot-ka ku hadla luqadaha badan oo loogu talagalay muwaadiniinta Afrikaanka ah, cilmi baadheyaasha iyo siyaasad dejiyayaasha si ay jawaab deg deg ah uga bixiyaan COVID-19 - AfricanArXiv
Published by WadahadalkaShaft & AfricArXiv on 8th May 2020 8th May 2020
Bilowga Jarmalka Wadahadalka iyo bakhaar-ka hore ee diyaarinta aasaaska diyaarinta-panic African-ka AfrikArXiv u diyaariyaan barnaamij ku hadla luqado badan oo loogu talagalay muwaadiniinta Afrikaanka ah, baarayaasha iyo kuwa sameeya siyaasad-dejiyaha si ay jawaab deg-deg ah uga bixiyaan agagaarka COVID-19.
Faafida coronavirus wuxuu dunida ka buuxiyay xoog cajiib ah. Dadka badankood way ku adag tahay inay dib-u-eegis ku sameeyaan xaaladda hadda jirta iyo wax walba oo ka sarreeya waxay ka walwalaan caafimaadkooda. Kooxda Isbitaalka Magaalada Berlin Vivantes Waxay hirgalisay websaydhka 'Covid-19 chatbot' websaydhkooda bishii Maarso 2020. Telefonku wuxuu kaga jawaabayaa 1000 su'aalood maalintiiba luuqado badan (Jarmal, Ingiriis, Turki, Ruush iyo Carabi) iyo saacad walba. Sirdoonka farshaxanka, oo ay weheliso suurtagalnimada in su'aalo lagu waydiiyo wadahadal, waxay ka jawaabaan su'aalaha ugu habboon ee ku saabsan fayraska, waxay bukaannada ku mutaystaan ​​iyagoo adeegsanaya nidaam khabiiro waxayna siinayaan talooyin gaar ah oo ficil ah.
Caawiyayaal macmiil ah sida sheekaysiga sheekooyinku waxay leeyihiin awood weyn, maxaa yeelay waxaa la heli karaa 24/7 oo uga jawaabaan su'aalaha aasaasiga ah ee luqadaha kala duwan si otomaatig ah. Wareejinta macluumaadka fudfudud oo deg deg ah waxay ka caawineysaa muwaadiniinta iyo bukaanka, gaar ahaan xilliyadan aan la hubin.
Olga Heuser, Wadahadal CEO
Barnaamijka 'COVID-19 chatbot' wuxuu bixiyaa macluumaad deg deg ah oo ku saabsan caabuq suurogal ah iyo calaamadaha caamka ah iyo sidoo kale halka macluumaad dheeri ah, aaminaad iyo macluumaad-gobol gaar ah laga soo qaadan karo. Inta lagu guda jiro wejiga koowaad ee bil, waxaan si dhaw ula socon doonnaa su'aalaha ay soo booqdeen bartayada soo booqdeen waxaanna la jaan qaadi doonaa jawaabaha saxda ah.
Waraaqaha qaabaynta ayaa ah nidaam wada hadal oo u adeega sidii luuqadaha dabiiciga adeegsada ee macluumaadka iyo bixiyeyaasha adeegga. Iyada oo la adeegsanayo ka mid noqoshada websaydhkaan websaydhka AfricanArXiv kooxdeena ayaa awoodi doonta inay sifiican u fududeyn karto helitaanka waqtiga iyo hufnaanta macluumaadka la xiriira cilmi baarista saynisyahanada Afrikaanka ah ee la xiriira COVID-19 iyo sida ugufiican ee looga caawiyo sameynta natiijooyinkooda cilmi baarista si loo helo aqoonyahano caalami ah. hadal iyo wadahadal.
Luke Okelo, Jaamacadda Farsamada ee Kenya [ORCID iD]
Adigoo adeegsanaya Luqadda dabiiciga ah (NLP) iyadoo la adeegsanayo Google Translate, chatbot-ka waxaa lagu heli karaa in kabadan 100 luqadood oo ay ka mid yihiin Afrikaan, Carabi, Amarinth, Chichewa, Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Hindi, Hindi, Malagasy, Boortaqiis, Sesotho, Soomaali, Sunda , Sawaaxiliga, Xhosa, Yoruba, iyo Zulu. Intii lagu gudajiray wejiga koowaad, waxaan tijaabin doonaa saxsanaanta tarjumaadda afafka Afrika waxaana ka raadinaynaa jawaab celin booqdayaashayada si aan u wanaajinno tarjumaadaha luqadaha inta badan lagu isticmaalo xaalladaan. Nala soo xiriir haddii aad jeclaan lahayd inaad naga caawiso ku darista luqado badan oo Afrikaan ah liistadaas, ama haddii ay jiraan faallo, su'aalo ama walaacyo.
Ku saabsan DialogShift
WadahadalkaPlatform AI Platform wuxuu awood u siinayaa shirkadaha iyo ururada inay ku dhexgalaan khibradaha wada sheekaysiga tooska iyo otomaatiga ah ee aaladaha badan oo u oggolaanaya macmiilka ama isgaadhsiinta isticmaalaha farriinta ama wada sheekaysiga (bots) meelo kala duwan oo taabasho ah.
AfrikArxiv waa kayd bulsho oo bulshada u horseedaysa isgaarsiinta cilmi baarista Afrika. Waxaan bixinaa madal aan faa'ido doon ahayn oo aan ku soo daabacno waraaqaha shaqada, waraaqaha diyaarinta, qoraallada la aqbali karo (waraaqaha boostada), soo-bandhigyada, iyo barnaamijyada xogta iyada oo loo marayo aaladaha iskaashiga. AfricArxiv waxay u heellan tahay kobcinta cilmi baarista iyo iskaashiga ka dhexeeya saynisyahannada Afrikaanka, kor u qaadista aragtida wax soo saarka cilmi baarista Afrika iyo in la kordhiyo iskaashiga caalamiga ah.
id Praesent vulputate, ipsum Praesent natiijada. dictum massa Donec vel,